Ny jiro jiro sy ny haitao vaovao | Fanavaozana maintso
Samy nanana na nanana iray isika rehetra Jiro ao an-tranonay. Ity hazavana ity dia tena mafana sy mampiantrano. Izy io dia noforonina maherin'ny 130 taona lasa izay ary mbola ampiasaina ankehitriny. Amin'ny lafiny iray, dia manana ny andro isaina amin'ny fanjifana jiro tafahoatra azy mifanaraka amin'ny hazavana omeny antsika. Na izany aza, misy mpahay siansa namorona jiro fanaovan-jiro tsy manam-paharoa LED jiro.
Hidina ao anaty tantara ve ny jirofo mandrehitra sa hiseho ny revolisiona vaovao? Mandinika izany rehetra izany isika ato amin'ity lahatsoratra ity.
1 Veloma, jiro jiro
2 Hevitra jiro vaovao
3 Mekanisma maoderina sy fitsapana ilaina
4 Fanamboarana hazavana
Veloma, jiro jiro
Ity hazavana omen'ny jiro nentin-drazana ity dia manohy manazava ny efitranon'ny trano maro manerantany. Saingy, ny fifandraisana misy eo amin'ny fanjifana herinaratra sy ny famokarana jiro dia tsy eo anilany. Taorian'ny fisehoan'ny jiro LED eny an-tsena dia mihombo hatrany hatrany ny fijalian'ireo takamoa ireo amin'ny sehatry ny fiarahamonina. Ary tsy ho an'ny kely, satria ny jiro dia mahomby kokoa amin'ny angovo ary mifehy kokoa ny fiatraikany amin'ny tontolo iainana izy ireo. Tsy dia mihinana firy izy ireo ary manana fiainana ilaina lavitra kokoa noho ny an'ny mahazatra sy ny angovo mahomby.
Miaraka amin'ny fisehoan'ny jiro fanavotana angovo dia efa nanomboka nosoloina ny «incandescent». Ireo takamoa ireo dia tsy nahomby tahaka ny tamin'ny LED, satria lava kokoa ny fotoana fandrehitra ary tsy nahafeno ny filàna matetika ny herinaratra. Rehefa mampirehitra jiro manavotra angovo ianao dia kely ny jiro nomeny anao tamin'ny voalohany ary, nihena tsikelikely izy io. Izany dia natao ho an'ireo fotoana ireo rehefa miditra amin'ny efitrano izay hijanonanao mandritra ny fotoana fohy ianao. Tao anatin'ny minitra vitsy monja dia tsy natanjaka toy ny jirony ny jiro.
Ny 15% -n'ny angovo ampiasain'ny jiro mahazatra ihany no avadika ho hazavana. Ny ambiny dia very maina toy ny hafanana amin'ny alàlan'ny infrared. Impiry ianao no nitranga taminao fa mikasika ny jiro dia nandoro ny tenanao ianao Na ao amin'ny trano fidiovana miaraka amin'ny hazavan'ny fitaratra ianao ary mahatsikaritra ny hafanana mitohy omena an'ity jiro ity. Eny, miaraka amin'ny LEDs sy ny fiasan'ny maripana ambany dia tsy izany intsony no mitranga.
Hevitra jiro vaovao
Na dia nanisa ny androny aza ny jiro nentim-paharazana, azo inoana fa, noho ireo mpikaroka MIT, dia manana fivoahana vaovao eny an-tsena izy ireo. Ireo mpahay siansa ireo dia nahita fomba hanatsarana an'ity jiro ity ny fahombiazany ary hanohy hanazava ny trano eran'izao tontolo izao tahaka ny fanaon'izy ireo hatramin'izao taorian'ny namoronana azy.
Ireo takamoa ireo dia nataon'i Thomas Edison tamin'ny voalohany ary miasa amin'ny alàlan'ny fanamafisana tariby tungsten tsara. Mahatratra 2.700 degre ny maripanan'ity tariby ity. Ity tariby mafana ity dia mamoaka taratra mainty (karazana jiro manafana azy izy io) ary manafana ny ambin'ny jiro.
Amin'ny alàlan'ny fanananao ny 95% ny angovo nariany tamin'ny jiro tamin'ny endrika hafanana, mahatonga an'ireny takamoa ireny tsy mahomby. Noho io antony io, ny LEDs, amin'ny fiasa amin'ny maripana ambany kokoa, dia manala ireo mahazatra. Raha mikasika ny jiro LED mandeha ianao dia tsy ho may mihitsy.
Ny mpikaroka ao amin'ny MIT dia nanandrana nanome ity jiro ity tamin'ny fanaovana zavatra maromaro hanatsarana azy. Ny voalohany dia ny filamentan'ny metaly mafana dia tsy mamoy ny heriny toy ny hafanana sisa tavela, fa kosa dia aely amin'ny endrika taratra infrared. Ny ampahany iray hafa dia ny fakana ireo rafitra manodidina ny filament ary ataovy izay hisamborana azy ireo hoy ny taratra navoakan'ny taratra ka alefa indray ary avoaka indray toy ny hazavana hita maso. Amin'izany fomba izany, ny zavatra ho tratra dia ny fiezahana tsy hanafoana ny hafanana fa halefa indray ary ampiasaina hamoahana hazavana bebe kokoa.
Toy izao no nanolorana azy ho manome jiro hafa ny jiro mampirehitra.
Mekanisma maoderina sy fitsapana ilaina
Ny firafitra izay ezahanao hamboarina hamerenana ny hafanana avoaka sy hisorohana azy tsy hiparitaka dia vita amin'ny singa be dia be eto an-tany, noho izany dia azo foronina amin'ny fomba tsotra miaraka amin'ny haitao mahazatra. Izany dia hanampy betsaka amin'ny fampidinana ny vidin'ny famokarana ary hahatonga anao hanana fahombiazana amin'ny varotra noho ny fitomboan'ny fahaizanao.
Raha ampitahaintsika ny fahombiazan'ny jirama vaovao mety hitranga amin'ny taloha dia hitantsika fa manana ity farany fahombiazana eo anelanelan'ny 2 sy 3% raha ny vaovao kosa mety hahatratra 40%. Ity zava-misy ity dia mety ho revolisiona eo amin'ny tontolon'ny jiro.
Ny zava-misy dia tsy mora toy ny vinavina amin'ny teôria. Ny fitsapana izay atao amin'ny takamoa dia mbola mamela be faniriana. Fahombiazana manodidina ny 6,6% no tratra. Na izany aza, io isan-jato io dia efa mitovy amin'ny maro amin'ireo takamoa fluorescent ankehitriny ary manakaiky ny takamoa LED.
Ity mpikaroka ity dia miantso ity fomba ity ho toy ny fanodinana jiro satria amin'ny fanamboarana ny jiro vaovao dia maka halavan'ny halavany izy ireo ka tsy te hamadika azy ireo ho lasa manampy amin'ny hazavana hita maso. Amin'izany fomba izany, ny angovo izay ho rava dia madiodio indray hamadihana azy ho angovo hita maso.
Ny iray amin'ireo fanalahidy lehibe amin'ny fampivoarana an'ity jiro ity dia ny fanamboarana ny kristaly fotônika afaka miasa amin'ny halavan'ny halavany sy ny zoro. Izany no fomba hanatanterahana ny fahombiazany bebe kokoa amin'ny fizotry ny jiro. Izy ireo dia afaka mifaninana amin'ny loharanom-pahalalana mahazatra hafa ary koa ny jiro LED.
Na dia mino aza ny mpikaroka fa ny jiro LED dia tena tsara sy tena ilaina amin'ny famonjen-jiro, ity haitao vaovao ity dia afaka manampy amin'ny fampiroboroboana teknolojia misy izay mora ampiasaina sy mamorona ary mampitombo ny fifaninanana eo amin'ny tsena sy ny fahafahan'ny mpanjifa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Ny jiro jiro sy ny haitao vaovao